Real Madrid oo qorsheyneysa inay dalab xiiso leh ka gudbiso bar-tilmaameedka ugu xoogan ee kooxda Chelsea – Gool FM
Real Madrid oo qorsheyneysa inay dalab xiiso leh ka gudbiso bar-tilmaameedka ugu xoogan ee kooxda Chelsea
Dajiye January 5, 2020
(Madrid) 05 Jan 2020. Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada gudaha dalka Spain maamulka Real Madrid ayaa waxay isku diyaarinayaan inay la soo saxiixdaan xiddiga kooxda RB Leipzig ee Timo Werner.
Magaca Timo Werner ayaa lala xiriirinayay inuu ka dhaqaaqayo kooxdiisa reer Germany ee RB Leipzig inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee jiilaalka, iyadoo ay jiraan kooxo badan ee xiiseynaya adeegiisa.
Chelsea ayaa ah kooxda sida aadka ah u xiiseyneysa inay la soo saxiixato Timo Werner, kaddib markii laga qaaday ganaaxii ka saarnaa suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda.
Laakiin waxay u muuqataa in Chelsea ay waayi doonto fursadii ay kula soo saxiixan laheyd Timo Werner, kaddib markii ay kooxda Real Madrid wadahadalo deg-deg ah la gashay maamulka RB Leipzig, si ay u hesho adeega laacibkan.
Websaydhka Isbaanishka “ElDesmarque” ayaa cadeeyay in madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez uu aad ugu qancay awooda ciyaareed ee Timo Werner, kaasoo dhaliyay 18 gool 17 kulan uu u saftay RB Leipzig xilli ciyaareedkan horyaalka dalka Germany, iyo 23 gool oo ah dhamaan tartamada, taasoo ka dhigtay in saraakiisha Los Blancos ay rabitaan xoogan ka muujiyaan adeegiisa.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Real Madrid ay miiska u saartay kooxda RB Leipzig qiimo dhan 30 milyan euro iyo Luka Jovic, si ay kaga soo qaataan Timo Werner, kaddib markii uu weeraryahanka reer Serbia ku guuldareystay inuu la qabsado Los Blancos.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Timo Werner uu ku joogo kooxda RB Leipzig uu dhacayo xagaaga 2023.
Manchester United oo Kooxda Inter Milan u bandhigaysa Paul Pogba si ay uga hesho…
Kooxda Chelsea oo bishaan Janaayo iska iibinaysa labo ka mid ah xiddigaheeda